कुनै पनि मेरो सर्वर मा धेरै AI सँग उडान गर्न रुचि छ ???
प्रश्न कुनै पनि मेरो सर्वर मा धेरै AI सँग उडान गर्न रुचि छ ???
1 वर्ष5महिना पहिले #901 by fltbuff71
विवरणका लागि वेबसाइट fsxflywithmanyai.weebly.com हेर्नुहोस्
यदि पर्याप्त चासो भने निकट भविष्यमा समूह उडान सेट अप गर्नेछ।
म Rikooo डाउनलोड को उपयोग 737 र 747 livery पैक को लागि
मल्टीप्लेयरमा भित्तामा भित्तामा उड्न सक्दैन, तर JoinFS ठूलो छ र तपाईले नि: शुल्क उडानमा भाप, बक्स वा कुनै अन्य फ्लाइट सिम उड्न सक्नुहुनेछ।
म टेस्स्पिक प्रयोग गरिनँ र उनीहरूले सर्भरको लागि शुल्क लगाउँछन् जस्तो लाग्छ ....
रुचि छ भने, मलाई थाहा दिनुहोस्
एआई फ्लाइट प्लानरसँग कुराकानी गर्न म संलग्न फोटोहरू हेर्नुहोस्। .my server, and joinFS
समय पृष्ठ सिर्जना गर्न: 0.265 सेकेन्ड